ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ မင်းပြားမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ်မှာ အနိုင်ရရှိထား တဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှအောင်ညွန့်ကို မြေပုံမြို့နယ်တရားရုံးက အိမ်ကျော်နင်းမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှုစတဲ့ပုဒ်မ ၂ခုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
ပုဒ်မတစ်ခုစီအတွက် ထောင်ဒဏ် ၆ လစီ သီးခြားကျခံဖို့ မနေ့က အမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်ပြီး အယူခံဆက်ဝင် သွားမယ်လို့ အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်အေးနုစိန်က ပြောပါတယ်။
"ပါတီချင်းပြိုင်ကြတဲ့အခါမှာ အနိုင်ရလိုတဲ့ မသမာမှုတစ်ခုကို စတင်ပြီးတော့ အခုအနိုင်ရသွားပေမဲ့ တရားရုံးရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲက ထောင်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ ကျမတို့ ရခိုင်ပါတီရဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတစ်ခုဟာ မျှော်မှန်းထားတဲ့ အတိုင်း ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ ကျမတို့သုံးသပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့က မိမိတို့မှာရှိတဲ့ ဥပဒေပါ အခွင့်အရေးအတိုင်း အယူခံမှုတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်"
ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မင်းပြားမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ကနေ ဦးလှအောင်ညွှန့်က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာစံရွှေအောင်ကို ဆန္ဒမဲ ၂သောင်းကျော်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ အနိုင်ရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဟာ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရရင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်အရာရှိ ဦးသူရိန်ထွဋ်က ပြောပါတယ်။
"ထောင်ကျသွားပြီဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်က အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ် သွားပြီပေါ့၊ အဲ့နေရာက လစ်လပ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့၊ ကြားဖြတ်မှပြန်ရွေးရမယ်"
အဲ့ဒီမဲဆန္ဒနယ်ဟာ လစ်လပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှသာ ပြန်လည်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလက ကြံ့ခိုင်ဖံ့ွဖြိုးရေးပါတီက ဒေါက်တာစံရွှေအောင်ရဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ မင်းပြားမြို့ခံ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အဲဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုဖို့ ဦးလှအောင်ညွှန့်က သွားရောက်တားဆီးခဲ့တာကြောင့် အိမ်ကျော်နင်းမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု စတဲ့ ပုဒ်မ ၂ခုနဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးက ဦးလှအောင်ညွန့်ကို တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးလှအောင်ညွန့် ကို လက်ရှိ မြေပုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကျောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်ကို မကြာခင် ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၂၃ ဦး ရွေးချယ် ခံထားရပြီး၊ တစ်ဦးက ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေ ပျက်ပြယ်သွားတာကြောင့် ၂၂ ဦးသာ ကျန်ပါတယ်။
ခေါင်းစီးကြည့်ရင် အပြုသဘောမဆောင်ဖြစ်နေတယ်။အပြုသဘောနဲ့တမျိုးပြောင်းရေးသင့်တယ်။ဘာလို့လည်းဆိုရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်၂ တကယ်အဲလို လုပ်ခဲ့ရင် ပေးတဲ့အပြစ်ကိုခံ ရ မှာပါ။တနည်းအာဖြင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာတည်ဆဲဥပဒေနည်း ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့ အလေ့အကျင့် ဟုဆိုလိုသည့်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များက စံပြလုပ်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှပြည်သူတရပ်လုံးက ယုံကြည်အားကိုးမှာ ပါ။
Jan 31, 2016 09:21 PM
Law should be clear and no matter who is he or she. But justice to be equal for all.
Jan 30, 2016 02:48 PM
It's good signal before new govt and this is kind rule of law should be done all areas and should equally treat to all people who are living in Myanmar. Everybody should treat equally under law even though whatever she or he without discriminate races and religious.